August 8, 2017 – Arakan Times
AT Burmese မောင်တောမြို့နယ်၊ ကျွန်းပေါက်စုကျေးရွာအုပ်စုတွင်နယ်ခြားစောင့်ရဲများနှင့် စစ်တပ် ပူးပေါင်းပြီး ရိုဟင်ဂျာလူနေအိမ်များအား ဖျက်ဆီး ။
August 8, 2017	Leaveacomment 811 Views
၈.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းက ၊နယ်ခြားစောင့်ရဲ၅၀ခန့် က နယ်မြေ(၄)၊ကျွန်းပေါက်ပြုစုကျေးရွာအုပ်စုဘော်တလီ (၁ ) ၊ရွာကို ဝိုင်းဝန်း ပိတ်ဆို့ကာ လူနေအိမ်များ ၊အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များအားဖျက်ဆီး ၍ ဆန်များကိုဖြန့်ကြဲ ပစ်ကာ၊ တန်ဖိုးရှိသော ပစ္စည်းဥစ္စာများ အားယူဆောင်သွားကြောင်း၊ ၎င်းရွာနေ ဆင်းရဲမွဲတေ သူ ဆီးရူး(ဘ)အူမောရ်ဟာကိမ်း၏ နေအိမ်အား ဖြိုဖျက်၊ ဖျက်စီးခဲ့ပြီး အိမ်ရှိ ဆိတ် ၂ ကောင်အားသတ်ဖြတ်၍အသားအချို့ယူဆောင်သွားကာ ၊ ကျန်အသားများ အားပစ်ချထားခဲ့ကြောင်း၊အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ် လူ ၃ ဦးဖြစ်သော ဇာဖောရ်(ဘ)ကာဒိရ်ဘော်ရှူး၊ နုရ်အာလောမ်(ဘ)ဖူးရ်အာမတ်၊ ဖော်ဇောရ်ဟာကိမ်း(ရွာဟောင်းနေ)တို့ကို နေအိမ်မှဖမ်ဆီးပြီး လူမဆန်စွာရိုက်နှက်၍ ဇီးပင်ချောင်း စခန်းသို့ခေါ်သွားကာ နုရ်အာလောမ်ထံမှ၅သိန်း၊ ကျန်နှစ်ဦးမှ ငွေကျပ် ၁သိန်းစီ ရယူကာ ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ ကြောင်း၊ သို့သော်၎င်းတို့မှာ ယခုချိန်တွင် ဒဏ်ရာများကြောင့် အိပ်ရာထဲလှဲနေရကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ဒါသည်ရိုဟင်ဂျာတို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသော အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပါသည်။
Myanmar government allowed Rohingya Haj Pilgrims halted by Rakhine extremists from going to Yangon
August 8, 2017	Leaveacomment 1,531 Views
August 8, 2017 AT Staff Report At least twenty one Rohingya Haj pilgrims who were permitted by Myanmar government to go to Saudi Arabia for performing Haj have been halted by Rakhine extremists at AungNguma area while going to Sittwe for Yangon today, 8 August 2017. According to report, 13 pilgrims from Maungdaw and 8 pilgrims from Buthidaung were allowed ...
AT Burmese သက်ဆိုင်ရာ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆော်ဒီဘုရားဖူး သွားနေသည့် အီစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၈ ဦးအား အစွန်းရောက်ရခိုင်အုပ်စုမှအငူမော်၌အကြမ်းဖက်တားဆီးခြင်း။
August 8, 2017	Leaveacomment 749 Views
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များမှ ဒေသခံ အီစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာမှခွင့်ပြုမိန့်ရယူလျက်ဆော်ဒီအရေးဗီယားနိုင်ငံ၊ ရွှေမက္ကာဟ် မြို့သို့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဟာဂ်ျ ပြုရန်ထွက်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ယခုနှစ်တွင်လည်းအလားတူ ဟာဂ်ျ ပြု လုပ်ရန် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခရီးထွက်နေသော အီစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဟာဂျီလောင်း ၈ဦးသည် 8-8-2017 နေ့ နံနက်ချိန်တွင် အငူမော်မှ ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ထိုနေရာတွင်အသင့်ရောက်ရှိနေသောအစွန်းရောက်ရခိုင်အုပ်စု၏ အကြမ်းဖက်တားဆီးမှုကြောင့် မောင်တောဖက်သို့ပြန်လှည့်လာခဲ့ရကြောင်း သိရပါသည်။ တည်ဆဲဥပဒေအရ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည့်အလျောက် ဟာဂ်ျ ပြုလုပ်ရန် ခရီးထွက်နေသူများကို အင်အားသုံးအကြမ်းဖက်၍ တားဆီးနိုင်ခဲ့သည်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်း၏ပြယုဂ်ဟုသုံးသပ်ရပါသည်။ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်တွင်ပြဌါန်းအတည်ပြုထားသော အီစ္စလာမ်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မှာလည်းလက်တွေ့မှာမရှိတော့ကြောင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အစွန်းရောက်ရခိုင်အုပ်စုက မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် စိုးမိုးချယ်လှယ်နေသည်ကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အီစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ အီစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်အစွန်းရောက်ရခိုင်များကမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်ပြုမှုနေခြင်းကိုတစုံတရာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
A Rohingya boy assaulted, huge money extorted from his parents in Southern Maungdaw
August 8, 2017	Leaveacomment 1,015 Views
8 August 2017 AT Correspondent, Maungdaw A Rohingya boy was mercilessly assaulted byagroup of Rakhine extremists while he was going to plow his paddy lands nearby Rakhine residence from Indin Nayapara village of Southern Maungdaw on August 7, 2017. The boy was going with his plowing instruments at dawn to prepare his lands for cultivating paddy where he ...
August 8, 2017	Leaveacomment 1,004 Views
By Dr.Habib Siddiqui Every day I receive dozens of emails. Most of these emails (at least 30) are about Myanmar’s inhuman treatment of the minorities. It is simply depressing to read the sad stories of their extermination, aptly termed the slow-burning genocide by Dr. Maung Zarni,afellow human rights activist. Who would have thought that inaBuddhist country, ...
Myanmar Joint forces raid Tin May village, loot valuables and torture Rohingya
August 8, 2017	Leaveacomment 1,219 Views
August 8, 2017 AT Correspondent, Btd A group of Myanmar joint forces of army and Hlun Thein surrounded Tin May (Tami) village of Northern Buthidaung and conducted an intense raid in the village house by house and looted valuable accessories of Rohingya on7August 2017. Local sources said to our correspondent, the joint forces besieged the whole village and ...